Mamorona Playlists YouTube ho an'ny iPad | Vaovao IPhone
Rehefa ela niandrasana, ny Misy izao ny fampiharana YouTube tera-tany ho an'ny iPad. Raha mbola tsy nanavao ny iOS 6 ianao ary tsy fantatrao dia ampahatsiahivinay anao fa nandao ny fampiharana YouTube sy Google Maps i Apple ao amin'ny kinova vaovao ho an'ny finday Apple. Ny rindranasa amin'ny ankapobeny dia tsara dia tsara, mamela anao hitantana ny kaontinao avy amin'ny iPad, ary mazava ho azy fa afaka mahita ny fisoratana anarana rehetra ianao, ny lisitry ny lisitry ny tantara, ny tantara ... fa ny fiasa sasany dia somary miafina. Iray amin'izany ny ampio horonan-tsary amin'ny playlist anao.
Ao amin'ny menio izay hita eo ankavian'ny efijery dia afaka miditra amin'ny lisitray izahay, saingy ao anatin'izy ireo dia tsy misy azo atao ny manampy video. Hanao azy, tsy maintsy eo amin'ny efijery filalaovana horonantsary isika izay tianay ampiana, ary kitiho ny bokotra fizarana izay eo amin'ny farany ambany ankavia, avy eo isika dia afaka misafidy ny "Add to list" ary mifidy ireo lisitra efa noforoninay na vaovao.
Raha mamorona iray vaovao isika dia afaka misafidy raha tiantsika ny hidiran'ny besinimaro na ho an'ny besinimaro, ary amin'ny fikitihana ny Ok dia ho hita ao anaty lisitra ny rakitsary. Afaka mandeha amin'ny menio ankavia isika izao ary misafidy ny safidy Lists hahita azy. Raha te-hanala horonan-tsary avy amin'ny lisitra izahayEny, azontsika atao izany avy eo, amin'ny fipihana eo amin'ny bokotra Edit (ankavanana ambony).
Tena ilaina ny Playlists hahafahana mitety ny horonan-tsary tianao indrindra. Azonao atao ny mamorona lisitra miaraka amin'ireo horonantsary mozika tianao hilalao azy ireo isaky ny tianao tsy misy fahatapahana. Aza adino fa ireo lisitra ireo dia hampifanarahina amin'ireo fitaovana rehetra raha mbola manana kaonty YouTube mitovy amin'izy rehetra ianao.
Fanazavana fanampiny - Tonga ihany ny YouTube ho an'ny iPad, anisan'izany ny fanohanana ny AirPlay
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPhone » Fampianarana sy torolàlana » Mamorona Playlists YouTube ho an'ny iPad
Luskoefusko dia hoy izy:
Afaka miteny amiko ve ny olona iray hoe maninona aho no tsy afaka milalao ny horonan-tsary amin'ny playlist tsy tapaka…? MISAOTRA
Valiny tamin'i Luskoefusko
Mety hisy hilaza amiko ve hoe maninona no tsy mandeha mitohy ireo horonan-tsary ao anaty playlist aho…? Misaotra…
Tsy miseho intsony ireo playlist amin'ny ilany havia, inona no hataoko?
Louis Philippe dia hoy izy:
Tsy miseho amiko koa ireo playlist, ahoana no ahitako azy ireo na ahoana no fomba hahitako azy ireo?
Valiny tamin'i Luis Felipe
Bejeweled, lalao mampiankin-doha ambonin'ny zavatra rehetra